Nanosika ny fianakaviana Armeniana ho any amin’ny fahantrana ny COVID-19 · Global Voices teny Malagasy
Maro ny tolo-tanana indray mipalaka nataon'ny governemanta tamin'ny taona 2020
Voadika ny 24 Septambra 2021 4:46 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Español, Français, 繁體中文, عربي, English
Sary avy amin'i Artem Mikryukov. Nahazoana alalana, Chaikhana Media.
Ity lahatsoratr'i Narek Kirakosyan ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Chaikhana Media. Ny endrika nahitsy no navoaka eto hifanaraka amin'ny fifanarahana fiaraha-miasa ara-botoaty.
Very asa i Artyom Avetisyan, manan-janaka roa avy ao Gyumri, Armenia, raha vao nidona ny valan'aretina. Tao anatin'ny 19 volana ny fianakaviany ahitana olona efatra no miezaka tsy ho lasa tsy manam-pialofana sy mitolona handoa ny fanafody sy ny fitsaboana ny zananilahy fito taona, Felix, izay tena ilainy.
“Betsaka ny asako nialoha ny nielezan'ny viriosy fa vantany vao niely izany dia tsy nahazo antso hiasana intsony aho,” hoy izy. “Nanana fidiram-bola manodidina ny 150.000 drams (mihoatra kely ny 300 dollars US) isam-bolana aho, ka izay no very.”
Raha nahazo latsaka kokoa noho ny karaman'ny Armeniana ankapobeny izay 400 dollars US isam-bolana i Avetisyan talohan'ny Covid, dia niantraika amin'ny fiainan'ny zanany amin'ny ambaratonga rehetra ny fahaverezan'asa tampoka. Amin'izao fotoana izao i Avetisyan sy ny vadiny, Anna Davtyan, manahy mafy fa ho very trano itoerana noho ny tsy fahazakan-dry zareo intsony ny hofantrano isam-bolana mitentina 35,000-dram (75 dollars US).
Mbola mitolona mafy amin'ny fandoavana ny fitsaboana sy ny fikarakarana an'i Felix ihany koa ny fianakaviana. Tsy afa-miasa ny atidohan'i Felix, dingana fahatelo. Talohan'ny valan'aretina ny fianakaviana afa-nandoa ny fikarakarana azy (izay mitentina 152.000 drams isam-bolana, manodidina ny 307 dollars US), amin'ny ampahany noho ny fahalalahan-tanan'ny mpanao asa-soa sy manan-katao ao an-toerana.
Fa tsy azo natao ny nanangona ny vatsy ilaina hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina. Amin'izao fotoana izao ny fianakaviana voafetra amin'ny tolo-tanana isam-bolana noho ny tsy fahafaha-mihetsika azon'i Felix avy amin'ny fanjakana (manodidina ny 50 dollars US).
Raha manahy hatrany amin'ny tsy fahampian'ny fidiram-bola ny fianakaviana dia mitolona ihany koa mba haharaka ny fianarana i Felix sy ny zokiny vavy sivy taona Donara rehefa tsy afa-niatrika fianarana ankihy ambolana maro noho ny tsy fananan'ny fianakaviana solosaina na smartphone.
Tsy tranga maningana velively amin'ny fiavotan-tena taorian'ny faharavan'ny toekarena nateraky ny valan'aretina ny fianakaviana Avetisyan. Tombanana ho 720.000 ireo Armeniana nikorisa nakany amin'ny fahantrana noho ny valan'aretina (tokonam-baravaran'ny fahantrana $5.50 taona 2011). Nifintina hatramin'ny valo isanjato tamin'ny taona 2020 ny toekarena Armeniana noho ny COVID-19 sy ny fepetra fihibohana izay nampiharina ho fampihenana ny halakin'ny fielezan'ny viriosy, araka ny Banky Mondialy.
“Nampiakatra haingana ny tahan'ny fahantrana ao Armenia ny fiantraikany fohy ezaka nateraky ny COVID-19 amin'ny fidirambolan'ny tokantrano mpiasa sy tsy mpiasa,” hoy ny fanamarihan'ny Banky Mondialy tamin'ny tatitra iray nivoaka tamin'ny febroary 2021.
Hita ao amin'ny tatitra fa mety ho niakatra avy amin'ny 33,6 isanjato mankany amin'ny 46,6 isanjato ny tahan'ny fahantrana noho ny valan'aretina, ary nitombo avy amin'ny iray isanjato mankany amin'ny fito isanjato ny isan'ny olona latsaka lalina ao amin'ny fahantrana. “Mety hampahantra Armeniana miisa 370.000 ny dona ara-toekarena nateraky ny COVID-19. Mihoatra ny 720.000 (iray amin'ny efatra) ny Armeniana mety mizaka fidinan-tsaranga tamin'ny taona 2020,” hoy ny nambaran'ny tatitra.
Niezaka ny governemanta Armeniana nanolo-bola indray mandeha hanampiana ny olona hiavo-tena amin'ny fihibohana nateraky ny valan'aretina tamin'ny taona 2020.
Natokana ho an'ny vondron'olona manokana mahafeno fepetra ny tolo-tanana: nahazo vola indray naloa mitentina 26.500 drams (53 dollars US) isaky ny zaza ny fianakaviana; ireo manana anton'asa amin'ny fomba ofisialy nandray 68.000 drams (136 dollars US) ho tambin'ny fihibohana iray volana; ary ireo tompon'ny fihariana nizaka ny mafy indrindra, tahaka ny varotra atsinjarany sy ny fizahantany, nomena ny 10 isanjato amin'ny tamberim-bidy efa-bolana fahefatra 2019 ary nahazo mitovy amin'ny atsasa-karamany iray volana ny mpiasan-dry zareo.
Ary amin'ny maha-mpiasa isan'andro an'i Avetisyan, dia tsy nahazo tolo-tanana noho ny tsy fananan'asa izy. Vola naloa ho an'ny ankizy indray mandeha no azon'ny fianakaviany.
Saingy volana maro taorian'ny tolo-tanana, mbola tsy nanana asa ihany i Avetisyan ary tsy manan-tsafidy loatra mandra-piverin'ny toekarena sy fahazoany asa.
Toa zary mitovy amin'ny mahazo azy ny ao amin'ny faritra Shirak, izay iorenan'i Gyumri. Eny fa na dia talohan'ny valan'aretina aza dia manana ny taham-pahantrana avo indrindra ao Armenia ny faritra — 48,4 isanjato no miaina ao anatin'ny tokonam-baravaran'ny fahantrana araka ny Banky Mondialy.
Mafy indrindra ny toe-draharaha ho an'ny ankizy ao amin'ny faritra, satria ankizy iray amin'ny roa no miaina ao anaty fahantrana.
Vao maika nanaratsy ny zavamisy ny valan'aretina, noho ny tsy fahafahana mandeha mankany Rosia hiasa napetraky ny famerana tsy hahazo (mivezivezy).
Ao Maralik, very ny fidiram-bola tokan'ny fianakaviana Kirakosyan nandritra ny valan'aretina noho ny fikatonan'ny lalana mankany Rosia. Ho an'i Davit fito taona, ny tsy fahampiam-bola dia midika fa tsy afa-nianatra ankihy izy ary dia tavela. Ankehitriny ao amin'ny ambaratonga faharoa, mbola tsy mahalala ny litera rehetra ao amin'ny abidy izy ary tsy afa-manoratra na mamaky teny.
Vardan Ikilikyan, filohan'i Azatan, iray amin'ny vondrom-piarahamonina lehibe indrindra ao amin'ny faritra Shirak, no niteny fa na dia azo atao aza ny mankany Rosia amin'izao fotoana izao amin'ny fijery teknika, ny havesatry ny fitiliana PCR sy ny halafon'ny saran-dalana no mametraka ny olona hijanona ao an-trano.
“Manodidina ny 30 isanjaton'ny mponina ao Azatan no mandeha any andafy hiasa, indrindra fa ny mankany Yakutsk, Moskoa, Sakhalin, Vladivostok, izay ahitana ny asam-panorenana. Noho ny coronavirus, eto tsy afa-mandao ny toerana ny mpiasa,” hoy izy, manombana fa manodidina ny 300 ny fianakaviana tratran'izany ao Azatan fotsiny.
Tiorkmenistana 2 herinandro izay
Mahafinaritra ve ianao? Ho anao izany ireto sary Ultraman ahetsiketsika ireto
Azia Atsinanana 16 Novambra 2015